sunita thapa, Author at raradiodarpan.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिष विस्तार गरेसंगै शहरी विकास मन्त्री भएकी रामकुमारी झाक्री एकाएक वामदेव गौतमको घरमा भेटिएकी थिइन् । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गौतमको घरमा झाँक्री देखिनु धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव पनि रहेकी झाँक्री दशैंको टिका लगाउन गौतम...
आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अदालत ले लगायो टिकटक माथि प्रतिबन्ध !
काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले लोकप्रिय भिडियो एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। सोही क्रममा पाकिस्तानमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पाकिस्तानको एक अदालतले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको आदेश दिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टिकटकमा अश्लील सामग्रीका भिडियो राखिएको भन्दै अदालतले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको आदेश दिएको...
ओलीलाई फ्लोर क्रस गरेर ढाल्ने होः भिम रावल
काठमाडौं, २३ बैशाख । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पत्रकाटिएकै दिन नेकपा एमालेले सांसद सदस्यबाट समेत कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । देउवा निकट...
यी निर्माताले राखेका थिए ‘पवित्र रिश्ता’ की नायिका अङ्कितालाई एक रात सुत्ने अफर…
टिभी शो पवित्रा सिस्तामा सुशान्त सिंहसँग काम गरेर लोकप्रियता कमाएकी भारतीय सुन्दरी नायिका अङ्किता लोखन्डेले सुशान्तका लागि शाहरुख र सञ्जयको फिल्म छाडेको बताएकी छिन् । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको अहिले ९ महिना पुगिसकेका बेला कुनै समय उनको प्रेममा परेकी अंकिताले आफूले सुशान्तका...
राति यस्ता सपना देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् छिटै हुनेछ धनको वर्षात !
राति निदाउँदा हामी धेरै प्राकरका सपना देख्छौं। केहि सपनाहरु हामीलाई याद हुन्छ भने केहि सपनाहरु बिर्सन्छौं। तर सपना शास्त्रहरु अनुसार हरेक सपनाको हाम्रो जीवनमा घट्ने घटनाहरुसँग सम्बन्ध हुन्छ। शास्त्रमा हरेक प्रकारको सपनाको अर्थ हुन्छ। सपना शास्त्रमा केहि सपनाको बारेअम उल्लेख छ जसको अर्थ छिटै...
काठमाडौं, २३ बैशाख । काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको छ । बुधबारसम्म बिहान बेलुका नै पसल खुला गरिए पनि आजदेखि भने बिहान ९ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाइने गरी आदेश जारी भएको हो । अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय, डिपार्टमेन्ट स्टोर (खाद्य सामग्री...
आँखा फर्फराउनु तपाईको लागि शुभ कि अशुभ? जानिराखौ
अङ्ग ज्योतिषको अनुसार हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग फर्फराउनुको कुनै न कुनै अर्थ हुन्छ। यहाँसम्म कि आगामी घटनाहरूको बारेमा पनि यिनीहरुले जानकारी दिन्छ। त्यस्तै गरी, हाम्रो आँखा फर्फराउनुको पनि शुभ र अशुभ अर्थ छ। जब हाम्रो आँखा फर्फराउन सुरु हुन्छ तब हामी तुरुन्तै महसूस गर्छौ...
यस्ता छन् दिनहुँ नुहाउनुका फाईदा र बेफाइदा
मानिसहरुले आफ्नो छाला र कपालको सुरक्षा र राम्रो बनाउनका लागी भनेर दिनहुँ नुहाउने प्रचलन छ । जुन बेठीक भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । जानकारहरु भन्छन् दिनहुँ कपाल नुहाउँदा त्यसको प्राकृतिक तेल नष्ट हुन पुग्छ । त्यसैले सातामा तीन पटक मात्र नुहाउनु उपयुक्त हुन्छ । सातामा...
तपाइंलाई तपाइँको पार्टनरले प्रयोग मात्र त गरिरहेको छैन ?
तपाईंले धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा सुन्नु भएको होला जो आफ्ना पार्टनरहरूसँग खुशी छैनन्। उसलाई आफ्नो पार्टनर माथि संका छ कि “ऊ मात्र उसको स्वार्थको लागि उनको प्रयोग गरिरहेको छ, न कि प्रेम।” यस्तो धेरै सम्बन्ध हरुमा हुने गर्छ। यदि तपाईंलाई पनि लाग्छ कि तपाईंको पार्टनर...
मागी बिबाह गर्नु पहिले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
मागी बिबाहको अवधारणा हाम्रो देशमा धेरै लोकप्रिय छ। केहि मान्छेहरु प्रेम बिबाह गर्न पनि रुची राख्छन। तर देशमा धेरै शंख्या मागी बिबाह गर्नेको नै छ। आजपनि धेरै मान्छेहरु आफ्नो घर परिवारले रोजेको मान्छे संग नै बिबाह गर्न मन पराउछन्। मागी बिबाहमा तपाइंले आफ्नो लागि...